April | 2017 | Radio Himilo
radio himilo April 30, 2017	Features, Wararka Leave a comment 76 Views
Muqdisho – Nin caruus ah ayaa la qarracmay inuu indhihiisa ku arko gacalisadiisa oo guursaneysa nin kale – halkii ay isaga ka guursan laheyd xilli xafladdu ay ka soctay hool weyn oo uu kireeyey. Dhacdadan ayaa kasoo shaac-baxday bilowgii toddobaadkan ...
radio himilo April 30, 2017	Features, Wararka Leave a comment 84 Views
Muqdisho – Sey ayaa la niyad xun kadib markii afadiisa ay noqotay xaamilo kadibna ay dhashay cunug fasax la’aantiisa, marka loo eego dukumenti maxkamadeed oo Nigeria ku taalla. 39-jirka lagu magacaabo Michael Ayinde ayaa dacwad furriin ah ka gudbiyay afadiisa oo ...
Gimenez oo shaki lagelinayo safashada kulanka UCL ee Real iyo Atletico
radio himilo April 30, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 68 Views
Muqdisho – Daafaca Atletico Madrid, Jose Gimenez ayaa hardan ugu jiro kamid noqoshada ciyaartoyda kulan Talaadada ay kooxdu kula balansan tahay dhiggeeda Real Madrid ciyaar katirsan Champion League. Gimenez waxaa laga saaray qeybtii hore ee ciyaartii ay kooxdu 5-0 ku xaaqday ...
Alba: “Riyadaydu waa inan waqti badan usii ciyaaro Barcelona.”
radio himilo April 30, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 85 Views
Muqdisho – Laacibka Spain u dhashay ee Jordi Alba ayaa doonaya inuu kusii nagaado kooxda Barcelona waqti badan iyada oo mugdi uu ku jiro mustaqbalkiisa. Alba ayaa ku wareersan gudaha Camp Nou kadib markii laga saaray xulka hore ee naadiga. Waxaana ...
radio himilo April 29, 2017	Idaacadda Himilo, Uncategorized Leave a comment 75 Views
Campell oo ka hadlay mustaqbalka Ozil iyo Sanchez ee Arsenal
radio himilo April 29, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 101 Views
Muqdisho – Sol Campbell ayaa filaya in Mesut Ozil uu saxiixi doono heshiis cusub, hayeeshe ay muuqato suura-galnimo dhab ah oo ku aadan in Sanchez ka dhaqaaqi doono gegida Emirates ee Arsenal. Labadan laacibka ayaa wali laga dhursugayaa inay heshiis cusub ...
Pires oo tilmaamay in Mbappe uu ku biiri doono Arsenal – balse diiday in lala mid dhigo Henry
radio himilo April 29, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 88 Views
Muqdisho – Kylian Mbappe, wuu la saxiixan doonaa Arsenal, hayeeshe xirfad-yahankan da’da yar ee Monaco waa inaan lala barbar dhigin laacibkii hore ee Gunner-ka, Thierry Henry, sidaas waxaa yiri Robert Pires. Weeraryahankan 18-jirka ah ee ayaa indhaha horyaallada Yurub soo jiitay taniyo markii ...
radio himilo April 29, 2017	Features, Wararka Leave a comment 74 Views
Muqdisho – Maalin kasta, 6,300 oo qof ayaa u dhinta natiijada shilalka ku yimaada howl-maalmeedkooda ama siyaalo kale oo la xiriira – in ka badan 2.3 milyan oo xoogsato ama shaqaale ah ayaa sanadkiiba u geeriyooda. 317 milyan oo shilal ...
radio himilo April 26, 2017	Idaacadda Himilo Leave a comment 94 Views
Muqdisho – Barnaamijka dalka iyo dadka waxaan dadweynaha Soomaaliyeed ugu soo gudbinaa macluumaad la xiriira dalka iyo dadka oo aan kolba gees ka eegno. Waxaa soo jeedina Weriye Maxamed Khadar Cabdi. Halkan Hoose Ka Dhageyso:-
radio himilo April 26, 2017	Features, Wararka Leave a comment 106 Views
Muqdisho – Haweeney u dhalatay dalka Australia, ayaa rikoorka caalamka ku gashay u adeegsiga carrabkeeda inay ku joojiso marwaxad ama dhigdhigo babaneysa, marka loo eego muuqaal lasoo dhigay barta internet-ka. Zoe Ellis, oo sidoo kale loo yaqaan Zoe L’Amore, waxay ...